Isifutho sophethiloli umfutho ophakeme (futha) - ingenye yezingxenye ezibaluleke kakhulu kwanoma iyiphi injini diesel. Kuyinto ngokusebenzisa le ngxenye uphethiloli ihlinzekwa ukuze singathwesi awela ekamelweni woketshezi, ingxube uphethiloli emoyeni. futha Umsebenzi kakhulu kuthinta pair plunger. Nge lesi sici wenziwa nokusatshalaliswa uphethiloli yanikezwa injini. Futhi namhlanje sizobheka ukuthi umbhangqwana plunger, yeka ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba imoto udizili.
Ukwakhiwa kwalesi sakhi kudinga izakhi ezimbili eziyisisekelo - emkhonweni kanye plunger. Lesi sakamuva siqukethe piston elincane ukuma cylindrical. Lapho futha lento unikezwa ehamba ngaphakathi emkhonweni. Ngenxa ukunyakaza reciprocating lapho ukukhiqiza, umjovo fuel Kwenziwa, kwathi ngemva kwalokho ukuncela nophethiloli. Ipheya plunger umjovo futha (isithombe sento ungabona ngezansi) has izimbobo ku emkhonweni. Ngabo kwenzeka umjovo udizili amafutha okuphakelayo.
Yileyo injongo eyinhloko futhi umsebenzi obalulekile walesi sakhi kuyinto ukuze kukalwe esiqondile yokubasela kwezidingo zayo amasilinda injini. Ngaphezu kwalokho, ngokusebenzisa le futha cell eletha uphethiloli ngesikhathi ingcindezi ethile ngesikhathi esifanele. Kodwa ukuze bafeze le misebenzi ngaphandle ukwehluleka, plunger pair kumele bahlangabezane eziningi nezimfuneko zomsebenzi. kakhulu esifanayo ukukhiqizwa yayo kwenziwa imishini zobuchwepheshe (kuvamise amabhizinisi ezinkulu). I element ekhaya-like ayikwazi ekhiqizwa.
On umjovo umphini njengengxenye esemqoka kohlelo fuel
Injongo eyinhloko yale nto abaphila emigqeni ephezulu ingcindezi phakathi plunger kanye umugqa nophethiloli. Lokhu kukunika nokuncipha fuel ingcindezi, isidingo lokuvala esinembile futhi okusheshayo the Imibhobho esemzimbeni injector. Lokhu kuvimbela ukwakheka fuel amaconsi, futhi ukuba khona kwabo kukhona engathandeki kakhulu. Phakathi umjovo ingcindezi ukuthi is wadala esikhaleni ngaphezu plunger kuveza ukwanda Isigaxa osenyameni valve. Ngaphezu kwalokho, umfutho fuel uthola isibhamu ngepayipi fuel futhi umnikazi valve. Uma inkatho plunger kuvula ndima kokuwa, ezingeni ingcindezi ekamelweni lehla, futhi entwasahlobo odlulela ukudedelwa umphini kudivayisi umzimba kwesihlalo ngemuva. Lesi senzo senzeka ohlelweni njengoba nje plunger kungaqali unhlangothi entsha.
Ingabe avuzayo plunger Wazivelela?
Ngokuningiliziwe qualitative amathuba ukuvuza fuel kungu-zero. Ukunciphisa amathuba fuel ukuvuza, igebe phakathi emikhonweni kanye plunger senziwa ukuba 1.3 microns. Ngenxa ukunemba okuphezulu enjalo plunger ngamunye ikhethwa ngokwehlukene emkhonweni. Ngemva lokhu kwenziwa ngesikhathi kufaneleka imboni izingxenye ezimbili. Phakathi bumbela salezi zici ebusweni ngaphezu kwalokho lukhuni. Lokhu kwenziwa ukuze kuqinisekiswe isikhathi eside ngangokunokwenzeka ukuphila inkonzo ingxenye.
Plunger pair - lena isici esidinga ukunakekelwa okukhethekile ngesikhathi ukusebenza imoto futhi ukusebenza kwawo kohlelo nophethiloli. I yisibambiso izinga kanye nokusebenza ngaphandle kokuphazamiseka kwale ngxenye - ukusetshenziswa kuphela eliphezulu nophethiloli. Ngeshwa, kwi iziteshi yasekhaya igesi uphethiloli njengoba ezimbalwa ezizayo, ngakho imoto yethu abanikazi (ikakhulu labo ababenezinkinga udizili izimoto) ngokuvamile kudingeka ukulungisa nokuhlanza umlomo wombhobho.
Okuqukethwe izithasiselo yamakhemikhali ahlukahlukene kanye lokuhlushwa esikhulu kodaka kanye imali kakhulu ukunciphisa plunger ukuphila service.
Ikakhulukazi ongemuhle amanzi, okuyilona elisebenzayo futhi ngezinye izikhathi ezitholakala fuel yasekhaya. Lapho lungena igebe phakathi emikhonweni kanye plunger, le Lubrication ifilimu ubuqotho iphazamisekile, lapho idivayisi uqala isebenze ngaphandle Lubrication. Lokhu kungaholela Ukushisa anda, ukusonteka ngisho wenza umcimbi izinto ezifana plunger pair. Kulokhu, aphume isimo, eyodwa kuphela - idivayisi entsha esikhundleni. Ukuze ugweme izinkinga ezifana, udinga ukuhlola njalo imishini fuel futhi uma kungenzeka ukuba ifake uphethiloli kaphethiloli abangabazi.
Lapho esikhundleni liyadingeka inhlangano plunger?
Kukhona izimpawu eziningana ezinkulu ibonisani inkinga ngengxenye. Omunye wabo kungukuqala ukwehluleka injini. Nokho, zokugwema ukuphuka zenhlangano plunger ukuchaza kungenzeka futhi nge injini ugijima. Kulokhu, kufanele sinake ikhwalithi umsebenzi motor. Uma kuwukuthi engazinzile futhi ngezikhathi, cishe, isizathu itholakala uhlelo nophethiloli. Futhi, uma engaphelele motor futha isici uqala kakhulu ukulahlekelwa amandla aso nesihlalo ezishisa kakhulu zikhipha izinhlayiyana nezinye imisindo ongakayisebenzisi ihlangabezane. Uma uqaphela okungenani omunye izimpawu ngenhla, kubalulekile ukuhlola uhlelo kukawoyela emotweni.
Kuyaphawuleka ukuthi udinga ube imishini ekhethekile zokuxilonga. Ngakho-ke, ngezandla zami futhi ngaphandle imishini ngendlela efanele, wena cishe bakwazi ukunquma ukuseviswa we plunger. Ngemva wizadi uphethwe unqume ukuthi ukulungiswa zenhlangano plunger kuyadingeka noma kufanele esikhundleni ngokuphelele entsha. Lapho silungisa asebenzisa imishini yokukhulisa ezithile, okuyinto ukubuyisela ubukhulu uphawu sokuqala plunger kanye emkhonweni. Esikhundleni kakhulu efanayo futhi kudinga ukunakekelwa kanye nobuchwepheshe ekhethekile, ngakho ukwenza okuthile eyingozi kakhulu futha ngezandla zakho, njengoba lokhu kungalimaza lonke uhlelo emotweni.
Ngakho, thina esiphethweni kanjani ukuthonya phezu futha plunger ngazimbili kanye zonke izici zayo. Ngokuvamile, uhlelo nophethiloli we udizili omlilo yangaphakathi injini - indlela eyinkimbinkimbi kakhulu okudinga ukunakekela akhethekile kakhulu eliphezulu nophethiloli. Kule ndaba, inani udizili izimoto ezweni lakithi ephansi kakhulu kunalokho esemancane eNtshonalanga Yurophu. Phela, ngezandla zabo ukukhonza fuel cishe kungenakwenzeka, futhi chithani njalo imali zokulungisa ebizayo nokuhlola neze ubani ofuna.
Izimoto ezisemaphandleni: ukulethwa kwezinto ezisindayo, ezinamandla noma ezihambisanayo ngesikhathi esifushane kakhulu
Razdatka Gaz-69: incazelo zedivayisi, ukulungiswa
KamAZ: silungisa ngezandla zakhe
Tractor - Iyini? Brand futhi ezibekiweko tractor
I-TATA-613 - ukubuyekezwa kwabanikazi kanye nokucaciswa kobuchwepheshe
Kuyini Tonar? Igama elijwayelekile kanye owaziwa imoto ifektri
Izidakamizwa "Thiotriazoline": analogue, ukuqhathanisa yabo kanye nokubuyekeza
Kagesi wokuvimbela Ukumelana Kukhuluma
Abamba Ukushisa "yisilulu sokusanhlamvu" ngezandla zakhe. Imidwebo, izithombe
Casserole Kuyamangalisa esihlwabusayo amazambane nge inkukhu
Kuyini nezwekazi eningizimu nezwe
Conor McGregor: ukuqeqeshwa, ukulwa, ukuphila
Imvelo, uhlalwe izinto eziphilayo eplanethini yethu
Uyithola kanjani isembatho "Maynkraft"?
Richard Branson: Biography futhi izingcaphuno best usomabhizinisi